Ny Fanahy Masina | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny Fanahy Masina dia olona fahatelo ao amin'ny Andriamanitra ary lasa mandrakizay avy amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Zanaka. Izy no mpampionona nampanantenain'i Jesosy Kristy fa nirahin'Andriamanitra ho an'ny mino rehetra. Mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, mampiray antsika amin'ny Ray sy ny Zanaka ary manova antsika amin'ny alàlan'ny fibebahana sy ny fanamasinana ary amin'ny fanavaozana tsy tapaka dia manambatra antsika amin'ny sarin'i Kristy. Ny Fanahy Masina no loharanom-tsindrimandry sy faminaniana ao anaty Baiboly ary loharanon'ny firaisana sy ny fiarahamonina ao amin'ny Fiangonana. Manome fanomezana ara-panahy ho an'ny asan'ny filazantsara izy ary mpitari-dàlana tsy ankiato ny kristiana rehetra (Jaona 14,16:15,26; 2,4.17:19.38; Asan’ny Apostoly 28,19: 14,17, 26-1; Matio 1,2:3,5; Jaona 2: 1,21-1; 12,13 Petera 2: 13,13; Titosy 1: 12,1, 11 Petera 20,28:16,13, Korintiana; Korintiana; Korintiana; Asan’ny Apostoly; Jaona).
Ny Fanahy Masina dia matetika faritana amin'ny resaka fiasa, toy B. Ny herin'Andriamanitra na ny fanatrehany na ny fihetsika na ny feony. Moa ve izany fomba mety hamaritana ny saina?
I Jesosy dia voalaza ihany koa fa ny herin'Andriamanitra (Filipiana 4,13), ny fisian'Andriamanitra (Galatiana 2,20), ny asan'Andriamanitra (Jaona 5,19) sy ny feon'Andriamanitra (Jaona 3,34). Fa ny an'i Jesosy kosa dia miresaka momba ny toetran'ny tena.
Ny Soratra Masina koa dia manondro ireo toetra amam-panahin'ny Fanahy Masina ary avy eo mampiakatra ny mombamomba ny fanahy mihoatra ny fampiasana azy fotsiny. Ny Fanahy Masina dia manana finiavana (1 Korintiana 12,11: "Fa ireo rehetra ireo dia manome ilay fanahy tokana ary manome izay rehetra tadiaviny"). Ny Fanahy Masina dia mandinika, mahalala, mampianatra ary mampiavaka (1 Korintiana 2,10: 13).
Ny Fanahy Masina dia manana fihetseham-po. Ny fanahin'ny fahasoavana dia azo foanana (Hebreo 10,29) ary malahelo (Efesiana 4,30). Ny Fanahy Masina dia nampionona anay ary, toa an'i Jesosy, dia nantsoina ho mpanampy (Jaona 14,16). Amin'ny andalan-teny hafa ao amin'ny Soratra Masina, ny Fanahy Masina dia miteny, mandidy, manaporofo, mandainga ary mitranga. Ireo teny rehetra ireo dia mifanaraka amin'ny toetran'ny olona rehetra.
Raha ny ara-bakiteny dia tsy ny saina fa ny f. Ny saina dia hoe "olona", tsy "zavatra". Amin'ny ankamaroan'ny faribolana Kristiana dia antsoina hoe "izy" ny Fanahy Masina, izay tsy azo heverina ho fanehoana ny lahy sy ny vavy. Natao hanehoana ny toetran'ny saina.
Ny maha-Andriamanitra ny fanahy
Ny Baiboly dia mampiavaka ny toetran'Andriamanitra amin'ny Fanahy Masina. Tsy voalaza izy hoe manana anjely na toetran'ny olombelona.
Hoy ny Joba 33,4: "Ny Fanahin'Andriamanitra no nanao ahy, ary ny fofonain'ny Tsitoha no nanome aina ahy." Ny Fanahy Masina dia manangana. Mandrakizay ny saina (Hebreo 9,14). Mampiharihary izany (Salamo 139,7).
Diniho ny soratra masina dia ho hitanao fa ny saina dia tsy mahay, tsy manam-paharoa ary manome fiainana. Ireo rehetra ireo dia fananan'ny toetran'Andriamanitra. Noho izany ny Baiboly dia miantso ny Fanahy Masina ho masina.
Ny fampianarana fototra amin'ny Testamenta Vaovao dia ny hoe misy Andriamanitra (1 Korintiana 8,6; Romana 3,29-30; 1 Timoty 2,5; Galatiana 3,20). Nasehon'i Jesosy fa izy sy ny rainy dia nitovy an'izany andriamanitra izany (Jaona 10,30).
Raha "Fanahy" masina ny Fanahy Masina, Andriamanitra ve izy misaraka? Ny valiny dia tsy tokony. Raha izany no izy dia tsy iray ihany Andriamanitra.
Ny Soratra Masina dia manondro ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina miaraka amin'ny anarana mitovy lanja amin'ny fananganana fehezanteny.
Ao amin'ny Matio 28,19:2 dia milaza hoe: "... ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina". Tsy mitovy ireo anarana telo ireo ary samy manana ny lanjany ara-teny mitovy. Toy izany koa, ao amin’ny 13,14 Korintiana, dia nivavaka i "Jesosy Kristy Tompontsika sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana aminny Fanahy Masina ho aminareo rehetra". Nohazavain'i Petera fa "ny kristiana dia" voafidy tamin'ny nanamasinany ny Fanahy hankatò sy hofafazan'ny ra Jesosy Kristy " (1 Petera 1,2).
Noho izany, i Matio, i Paul ary i Peter dia nahatakatra tsara ny fahasamihafana misy eo amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Nilaza tamin'ny olona niova fo tao Korinto i Paul fa ny tena andriamanitra dia tsy fitambaran'andriamanitra (toa ny pantheon grika) izay samy omena fanomezana samihafa. Iray Andriamanitra ary iray ihany ny "fanahy iray" iray [iray] Tompo ... iray [iray ihany] Andriamanitra izay miasa ao amin'ny rehetra " (1 Korintiana 12,4: 6). Nanazava bebe kokoa momba ny fifandraisana misy eo amin'i Jesosy Kristy sy ny Fanahy Masina i Paul avy eo. Tsy fikambanana miavaka roa ireo, hoy izy "Tompo" (Jesosy) «ny fanahy» (2 Korintiana 3,17).
Nilaza i Jesosy fa handefa ny Fanahin'ny fahamarinana Andriamanitra Ray mba hivelomana amin'ny mpino (Jaona 16,12-17). Ny Fanahy dia milaza an'i Jesosy ary mampahatsiahy izay mahatoky amin'ny teniny (Jaona 14,26) ary nirahina avy amin'ny Ray amin'ny alalàn'ny Zanaka mba hanambara ny famonjena izay nataon'i Jesosy (Jaona 15,26). Tahaka ny Ray sy ny Zanaka dia iray, dia toy izany koa ny Zanaka sy ny Fanahy. Ary amin'ny fandefasana ny Fanahy dia mitoetra ao amintsika ny Ray.
Taorian'ny nahafatesan'ny Apôstôly Vaovao dia nisy ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ny fiangonana mikasika ny fomba ahalalana ny andriamanitra. Ny fanamby dia ny fitazonana ny firaisan'Andriamanitra. Ny fanazavana samihafa dia nametraka ny hevitra momba ny "bi-theism" (andriamanitra roa - ray sy zanakalahy, fa ny saina dia fiasa na izy roa tonta) ary ny tri-theisme (andriamanitra telo - ny ray, ny zanakalahy ary ny fanahy), nefa izany dia nanohitra ny fihetseham-po fototra izay hita ao amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao. (Andininy 2,10, sns).
Ny Trinity, teny tsy hita ao amin'ny Baiboly, dia modely novolavolain'ny Rain'ny Fiangonana tany am-boalohany mba hamaritana ny fomba ifandraisan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ao anatin'ny firaisan'ny Andriamanitra. Izy io no fiarovana kristiana miady amin'ny herinandron'ny "tri-theistic" sy "bi-theistic" ary miady amin'ny polytheism mpanompo sampy.
Ny metafora dia tsy afaka mamaritra ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra, fa afaka manampy antsika hahazo ny hevitry ny Andriamanitra telo izay iray izy ireo. Ny sary iray dia ny soso-kevitra fa ny olona iray dia zavatra telo indray mandeha: Toy ny fanahin'ny olona iray (Ny fo, fipetraky ny fihetseham-po), vatana sy saina (Tadidio), Andriamanitra no zanaka be fangorahana, zanaka (ny maha-andriamanitra tonga nofo - jereo Kolosiana 2,9) ary ny Fanahy Masina (izay tsy mahalala afa-tsy ny zavatra avy amin'Andriamanitra - jereo ny 1 Korintiana 2,11).
Ny andinin-tsoratra masina izay efa nampiasaintsika tamin'ity fandinihana ity dia mampianatra ny fahamarinana fa ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy dia olona samy hafa ao anatin'ny maha iray an'Andriamanitra. Ny fandikan-tenin'ny Baiboly NIV an'ny Isaia 9,6 dia manolotra eritreritra Trinitera. Ny zaza ateraka lasa "mpanolotsaina mahafinaritra" (ny Fanahy Masina), «Andriamanitra mahery» (ilay andriamanitra), "Ray Tsitoha" (Andriamanitra Ray) sy ny "Andrian'ny fiadanana" Antsoina (Andriamanitra Zanaka).
Ny Trinity dia nohajaina tamim-pitandremana avy amin'ny lafiny teolojika samihafa. Koa z. Ohatra, ny fomba fijery tandrefana dia hierarchical sy statistika kokoa, raha ny fomba fijery any Atsinanana kosa dia fihetsika foana ao amin'ny vondron-dRainy, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Ny teolojia dia miresaka ny trinity sosialy sy ara-toekarena ary ireo hevitra hafa. Na izany aza, ny teolojia izay mihevitra fa ny ray, ny zanany sy ny fanahy dia manana ny sitrapo na ny faniriana na ny fisiany dia tsy marina. (ary noho izany ny fivavahan-diso) satria iray ihany Andriamanitra. Ao ny fitiavana sy fifaliana mahery vaika, fifaliana, firindrana ary firaisana tanteraka ao amin'ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy.
Ny Fotopampianaran'ny Trinite dia modely iray mba hahafantarana ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mazava ho azy fa tsy mivavaka foto-pinoana na modely isika. Isika dia mivavaka amin'ny Ray “amin'ny fanahy sy ny fahamarinana” (Jaona 4,24). Ny teolojia izay milaza fa ny Fanahy dia tokony hahazo ny lazany ara-drariny dia ahiahiana satria tsy manintona ny saina ho azy ny Fanahy fa manome voninahitra an'i Kristy (Jaona 16,13).
Ao amin ’ny Testamenta Vaovao, ny vavaka no ivavahana amin’ ny ray. Ny Baiboly dia tsy mitaky ny hivavaka amin'ny Fanahy Masina. Rehefa mivavaka amin'ny Ray isika dia mivavaka amin'ilay Trio Andriamanitra - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny tsy fitovian'ny andriamanitra dia tsy andriamanitra telo, izay samy mila fitandremana misaraka sy mivavaka tsara.
Ankoatr'izay, ny vavaka sy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy dia mitovy amin'ny fanaovana azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny batisan'ny Fanahy Masina dia tsy maha samy hafa ny batisan'i Kristy na ny lanjany kokoa satria ny Ray, Jesosy Tompo sy ny Fanahy dia iray.
Ny fanahy dia raisin'ireo rehetra amin'ny finoana izay mibebaka sy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ho famelan-keloka (Asan'ny Apôstôly 2,38:39, 3,14; Galatianina). Ny Fanahy Masina dia fanahin'ny maha-zanakalahy [fananganana] izay mijoro ho vavolombelona amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika (Romana 8,14: 16), ary isika dia “fehezina amin'ny Fanahy Masina nampanantenaina, izay tokin'ny lova ara-panahy. (Efesiana 1,14).
Raha manana ny Fanahy Masina isika, dia an'i Kristy (Romana 8,9). Ny fiangonana kristiana dia ampitahaina amin'ny tempolin'Andriamanitra satria ny Fanahy no mitoetra ao amin'ny mpino (1 Korintiana 3,16).
Ny Fanahy Masina dia ny Fanahin'i Kristy izay nanosika ireo mpaminanin'ny Testamenta Taloha (1 Pet. 1,10: 12) izay manadio ny fanahin'ny kristiana amin'ny fankatoavana ny fahamarinana (1 Petera 1,22), mahavita famonjena (Lioka 24,29), hamasino (1 Korintiana 6,11), mamoa voa masina (Galatiana 5,22: 25), ary mameno antsika hampiely ny filazantsara sy hanorina ny Fiangonana (1 Korintiana 12,1: 11-14,12; 4,7:16; Efesiana 12,4: 8; Romana).
Ny Fanahy Masina mitarika amin'ny fahamarinana rehetra (Jaona 16,13), ary sokafy amin'izao tontolo izao ny masonao momba ny ota sy ny fahamarinana ary ny fitsarana » (Jaona 16,8).
Ny fahamarinana ara-Baiboly voalohany dia ny hoe Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, mamorona ny finoantsika sy ny fiainantsika amin'ny maha-kristiana azy. Ny fiarahana mahafinaritra sy mahafinaritra izay nasehon'ny Ray, Zanaka sy Fanahy dia ny firaisana am-pitiavana izay ametrahan'i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika antsika amin'ny nofo amin'ny alalan'ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganany ary ny fiakarany.